Keyn - Gpedia, Your Encyclopedia
Keyn ka kooban geedo kala duwan
Keyn wadarteeda loo yaqaano Keymo (ingiriis: Forest) waa dhul baaxad balaadhan leh oo geedo badan iyo cows badan leh, kuwaas oo dabiici ama dad-beer ah. Tiro badan oo dhir nooceeda, dhererkeeda iyo qaradeedu kala duwan tahay ayaa noqonaysa Keyn.
Ayadoo la tixraacayo qaab-dhismeedka, dhererka, caleenta, alwaaxa, deegaanka iyo cimilada geedka ayaa Keymaha waxaa loo kala saaraa 28 qeybood.
Keymaha dhererka gaaban leh.
1. Keymaha leh Caleenta cagaaran ee qodaxda.
2. Keymaha leh Caleen-qodaxeedka
3. Keymaha isku dhexjirka caleemo balaadhan iyo caleen-qodax.
4. Keymaha caleenta balaadhan ee waligeed cagaarka ah.
5. Keymaha Caleenta balaadhan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Keyn&oldid=188153"